Dhibee bilbiloonni keenya boquu keenya irratti qaqabsisan – Akkam Jirtuu? Nooraa!
Dhibee bilbiloonni keenya boquu keenya irratti qaqabsisan
Akkuma yaadatamuu mata duree darbee kessatti rakkoo bilbillifi komputeeri keenya ija keenya irratti qaqabsisa jiru waliin ilaalun keenyaa ni yaadatama, akka isin irraa baratanii ija kessaniif kununsa gochuu jalqabdan nan ni abdana. Har’a wanta nuti waliin baranuu dhibbaa gadi jedhanii fayyadamuun lafee boquu kenya irraan gahuudha, Ofirraa irraa kaaftani beektu jenne amana namotni baayyeen yeroo baayyee gadi jechuudhan bilbila kessan gadi ilaala fayyadamtu, kuun garuu baayyee dhibbaa guddaa lafee boquu keenya irraa gara ispayinaal kordi deemu irratti qaqabsisa kuunis gadi jennee yommuu fayydamnuu ulfaatinni mataa keenya lafee boquu keenyaa waan baayyee gadi harkisuuf deemsa kessa hanga lafeen boquu keenya humna dhabuun mataa keenya baachuu dadhabuuttilee deemu dandaha! Akkasiti fayyadamaa jirtuure ?
Akkumma mata duree darbee keessatti kanaafis furmaata isiniif keenya isiniis akka furmaatati qabxilee nuti asirratti keenye hojirra olchuudhaan akka rakkoo lafee boquu kessan irra gahuu hanbiftan abdi qabna.
Kahumsi gadi jedhanii mobaayilii fayydamuu inni guddaan oddefannoo dhoksuuf akka tahee qoranon addaa addaa ni mulisa kunis namni boodaan jiru akka hin agareefi, hatahuu malee immoo bu’aa isaa caala midhaa isaatu caala.
Wantoota ykn dhimma akka nuti boqu keenya ol qabne mobayila keenya fuldura ija keenyaatti olqabnee hin fayyadamnee nu godhan bakka hin mijaneetti fayyadamuu dhisuu ykn , dubisuuf barressuu irraa of qusachuu.
Boquu keenya ol-qabuu of shaakalchisuu
Gadi jechuun yeroo dheeraaf amala kan nutti tahee yoo tahee ispoortii mormaa hojjechuun morma keenya ol jechuu shakalchisuu.
Kan furmaati armaan olii jijirama isiniif hin keninee yoo tahee dugdaan cisuudhaan fayyadamuun fillannoo isa dhumati jenne amana.
Waan harra dubiftanirra akka isiin waa baratan ni amana! Egaa waan baratan kana hiriyyaaf fira keessaniin gahuudhaan bala morma isaanirra gahuu dandahuu akka hanbisaniif qoodaafi.
Kutaa itti aanu kessatti rakkoo xinsammuu teknoolojiif interneetin nurratti qaqabsisuu waliin ilaala.